🥇 ▷ Khayaanada emailka rabshadaha ayaa sii kordheysa ✅
Khayaanada emailka rabshadaha ayaa sii kordheysa
Khayaanada tuugada emaylka ayaa mar kale loo adeegsadaa cybercriminal sida ku xusan cilmibaadhis cusub oo Symantec oo si guul leh u joojisay ku dhawaad ​​300 milyan oo emails ah shantii bilood ee ugu horreeysay 2019.
Khayaanada waxay bilaabataa marka isticmaalegu helo emayl leh mid ka mid ah furayaasha sirta ah ee khadka khadka mawduuca. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in xiisahoodu mashquul ku noqdo, sidaa daraadeed waxay gujinayaan farriinta kaliya si ay u ogaadaan in qof jabsaday kamaradooda websaydhka oo ku duubey waxqabadyo dhow. Weeraryahannadu waxay markaa ku hanjabeen inay u diraan cajaladdan dhammaan qof kasta oo ku jira liiska ay la xiriiraan haddii aysan u dirin dhowr boqol oo doolar oo ah bitcoins.
Dad badani waxay ku helaan naftooda xaaladdan saxda ah intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay markii Symantec ay aragtay kororka iyo isbeddelka khayaanada e-maylka e-maylka ee loo diray. Khayaanada noocan ah waxay jirtay sanado, laakiin muuqaalka kore ee kor lagu soo sheegay (oo badanaa loo yaqaan “khiyaano”) khiyaanooyin waa mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee khiyaanada lacageed ee shirkadaha ay bilaabeen inay si isdaba joog ah u arkaan ilaa bartamihii 2018.
Inta u dhaxaysa 1 Symantec ayaa xannibay emaylka noocan ah wax ka yar 289 milyan Janaayo iyo 29ka May, 2019. Inka badan 85 milyan oo emaylkan ah (ku dhawaad ​​30 boqolkiiba) ayaa la xannibay muddadii Feebarwari 17 markaas oo ay si weyn u boodday khayaanada noocan ah. .
Khayaanada baadista emaylka
Ka sokow khayaanada email-ka galmada, Symantec waxay kaloo aragtay dhowr farqi oo kala duwan oo ah e-mayl been-abuur ah, oo ay ku jiraan kuwa leh qoraal cad oo Ingriis ah, qaar ayaa loo hanjabay hanjabaad bam, qaar waxay leeyihiin sawirro PNG ama JPEG oo ay ku jiraan cinwaanno boorsada jeebka Bitcoin, qaarna leh lifaaqyo PDF leh Cinwaanada Wallet waxay ku jiraan PDF qaarna waxay isticmaalaan cinwaannada SegWit Bitcoin.
Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in kuwa wax weerara ay adeegsadaan farqiyada farriimaha, sida isticmaalka lifaaqa ama jilayaasha qarsoon iyagoo isku dayaya inay ka leexiyaan tikniyoolajiyadda amniga ee emailka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah soosaarayayaasha spam waxay ku shaqeyn karaan iyagoo xayiri emails ka leh cinwaannada Bitcoin ee jirka, sidaa darteed qofka wax weerara wuxuu beddeli karaa isticmaalka waxyaabaha ku lifaaqan PDF ama qoraalka qarsoon si uu isugu dayo inuu ka fogaado waxyaabaha sifeeya spam.
Emails badan ayaa sidoo kale leh passwords ama lambarro lambar taleefan oo qeyb ah oo la xiriira cinwaanka emaylka ee emaylka loo diray. Macluumaadkaan waxaa loo galiyay si ay ugu muuqato in qofka wax weerarayaa uu heli karo macluumaadka shaqsiga ah ee ku saabsan qofka helaya goorta, dhab ahaantii, ay ka heli karaan tafaasiishaas mid ka mid ah tuugada sirta ah ee waa weyn sanadihii ugu dambeeyay.
Intooda badan e-maylladaas khiyaanada ah, qofka wax weerarayaa wuxuu sheeganayaa inuu leeyahay diiwaangelin adeegsade booqanaya websaydh dadka waaweyn ah, laakiin xaaladaha qaarkood qofka wax weerarayaa wuxuu iska dhigaa inuu xubin ka yahay booliis oo ku helay astaameynta ilmaha ee aaladda isticmaalaha. Waxyaabaha ugu weyn ee tan looga reebi karo waa bambooyinka emailka ee cabsi-gelinta leh halkaasoo dirayuhu sheegayo inuu bam ku beeray dhismihiisa oo socon doona haddii aan lacagta la dalban la bixin.
Symantec waxay aaminsan tahay in ugu yaraan laba koox oo ah dambiyada internetka ay ka dambeeyaan qarixii ugu dambeeyay ee emailka khayaanada emailka ee aan u baahneyn aqoon sare oo farsamo inuu sameeyo. Shirkadda waxay kugula talineysaa adeegsiga tikniyoolajiyadda ilaalinta adag ee emailka, ma furin emayl ama lifaaqyo ka socda ilo aan la ogeyn, waxayna hubineysaa in koontadaada lagu ilaaliyo furaha sirta ah si looga fogaado inaad dhibbane u noqoto khiyaanadan.